Archive du 08-juin-2022
Fitsarana momba ny kolikoly Mavesatra ny fiampangana ny Ben’ny tanàna
Nametraka fitoriana ny Ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina sy ireo rehetra ambarany fa tsikombakomba aminy na olom-boafidy na olom-boatendry teny amin’ny Fitsarana momba ny kolikoly na ny PAC (Pôle Anti-Corruption) ny Mpanolontsain’ny tanànan’Antananarivo Rtoa Clémence Raharinirina sy ny mpisolovava azy azy Maître Eric
Tsipaky ny miala aina !
Mitaintain-dava tahaka ny sahobakaka ambodiriana sisa ny Fanjakana ankehitriny. Tsy mety marin-toerana hatramin’izao, ary manahy mafy amin’ny ho avy politikany.
Fandaharan’asa FIAVOTA Manampy betsaka ireo vehivavy sy ankizy any Atsimo
Ankoatra ny tosika ara-bola dia tohana goavana tena sitrahan’ireo mpisitraka ny fandaharanasa FIAVOTA, ny tantsoroka maro entina handrisihana ireto farany, hiova fihetsika,
Fifanarahana amin’ny Arabo Misy zavatra maro mampiahiahy
Mbola manjavozavo tanteraka ny endri-pifanarahana sy fiaraha-miasa eo amin’ny Fanjakana Malagasy tarihin’Atoa Andry Rajoelina sy ny Arabo.
Naivo Raholdina “Toherin’ny SMM ny veliranon’ny filoham-pirenena”
Nihaona tamin’ireo mpikamban’ny vaomieran’ny antenimieram-pirenena misahana ny aditany miverimberina teny Tsimbazaza omaly ny solontenan’ny minisiteran’ny tetibola sy ny toekarena sy ny minisitry ny filaminana anatiny.
Antananarivo renivohitra 180 lahy ireo mivelona aminy taxi-bisikileta
Mahatratra 180 isa ireo vatan-dehilahy mivelona amin’ny asa fitondrana taxi bisikileta eto Antananarivo renivohitra.
Fitsarana miaramila Adidy ho an’ny tanindrazana
Adidy amin’ny maha-olom-pirenena, indrindra fa ho an’ireo zatovolahy feno taona ny fitsarana miaramila. Toraka izany koa ny zatovovavy.
Depiote Ramilison Ange Richard “Diso fanantenana ny mpamokatra lavanila”
Diso fanantenana sy very fanahy mbola velona ankehitriny ny tantsaha mpamokatra lavanila ao amin’ny faritra SAVA, hoy ny depiote voafidy tao Sambava, Ramilison Ange Richard,
Fanjifana sy fahasalamana 200 ny aretina azo avy amin’ny sakafo tsy lavorary
Mitana ny laharana faha-28 amin’ny firenena 32 aty Afrika i Madagasikara amin’ny fanjifana sakafo tsy araha-pahasalamana, araka ny tatitra navoakan’ny CNCA (Comité National Codex Alimentaire)
Durlin Retogniane “Natao inona ireo sarin’ady tetsy sy teroa ireo ?”
Manoloana ny firongatry ny fakana zazavavy tanora nisesisesy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia mampametra-panontaniana hoe natao inona foana ireny sarin’ady na "simulation"
Efa hitsingerina indray ny 26 jona Natakalo teleferika ny îles Eparses ?
Mandeha ny ora sy fotoana, ho tapitra ihany ny 5 taona itondran’ny Filoha Andry Rajoelina fa ny veliranony momba ireo Nosy Malagasy nolazaina fa ho azo ary hivoaka mialohan’ny 26 jona 2020 ny fehin-kevitra aloha,
Fametrahana fandriampahalemana Miady amin’ny fakana an-keriny ny eny Alasora
Betsaka ireo Ray aman-dReny no lasa mitebiteby fatratra amin’izao. Noho ny fisian’ireo mpaka an-keriny etsy sy eroa no mahatonga izany hany ka misy mihitsy ireo lasa manakarama olona hanara-maso ny zanany amin’ny fakana sy fanaterana.
Laharana maitso-Kidnapping 75 isan’andro ny antso mananihany voarain’ny polisy
Tena be mpiantso tokoa ny polisim-pirenena nanomboka ny sabotsy teo indrindra mikasika ilay resaka fakana an-keriny izay nahazo vahana teto an-drenivohitra tato ho ato.
Caravane de la santé Olona miisa 8000 mahery no ezahina hahazo tombontsoa
Miditra amin’ny andiany fahadimy ny caravane de la santé ahitana karazana fizaham-pahasalamana maro lafy, indrindra fa ho an’ny vehivavy.
Radio Fanambarana Trano rihana 4 no tsangambaton’ny faha-25 taona
Feno 25 taona katroka tamin’ity taona 2022 ity ny Radio Fanambarana na ny RFA, radio ara-pilazantsara anisan’ny manana ny toerany eto amintsika.
SOTEMA Mahajanga Nipotsaka ny atidohan’ilay tovovavy voadonan’ny taxibe
Nitrangana toe-javatra mampalahelo omaly maraina tao Tanambao SOTEMA Mahajanga. Tovovavy kely iray vao 15 taona monja no maty nodomin’ny taxibe iray raha iny handeha hiampita arabe iny.
Julien Andriamorasata “Afaka adidy ny mpanohitra!”
Fotoanan’ny fikaonan-doham-pirenena izao ary tsy amin’ny maha birao politikan’ny antoko politika Tiako I Madagasikara no hiresahako eto fa amin’ny maha olom-pirenena mihitsy hoe tokony atao ilay izy,
Vangaindrano Nahatrarana rongony, toaka gasy ilay sprinter
Fiara Sprinter avy any Vangaindrano hiazo an’ Antananarivo no tratra nitondra rongony 11 fonosana, milanja 10,55 kg, kafe 03 gony milanja 137 kg,
Fisolokiana sy filokàna an-dalam-be Olona 4 no nosamborina tetsy Analakely
Olona miisa 04 no nosamborin’ ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny SUT (Sureté Urbaine de Tana) teo Analakely ny zoma 03 jona 2022 lasa teo rehefa nisoloky tamin’ny alalan’ny lalao “Mena mahazo”.
Ankazomanga, Tsaramasay Tratra ireo 3 lahy mpamaky trano sady mpanendaka
Tovolahy telo no tratran’ny polisy miasa ao amin’ny PPA4 manodidina an’Ankazomanga, Tsaramasay, Antohomadinika ny alatsinainy 06 jona teo rehefa namaky trano sy nanendaka.
Nisandoka ho mpiasan’ny kaominina Mitaky vola no sady mampiasa rosia hosoka
Lehilahy iray 44 taona no nosamborin’ ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny SUT(Sureté Urbaine de Tana) teny Anosy an-tanimbarin'Andriana ny sabotsy faha 04 jona teo noho ny fisandohana andraikitra.
Ady totohondry tany Toamasina Maty vokatry ny dona mafy ilay mpikatroka
Lehilahy iray antsoina hoe Marolahy Christian mpanao ady totohondry avy amin'ny klioba FITAMI ao Toamasina no namoy ny ainy taorian’ny ady nataony ny alatsinain’ny paska 06 jona lasa teo.
Fampiakaran-karama mbola tsy mihatra Ny didim-panjakana no erany, hoy ny CNaPS
Nanao fanambarana mikasika ny fampiakarana ny karama farany ambany ho 250 000 Ariary ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy na ny CNaPS omaly.